NgoJanuwari 2021-Funda ukurhweba
Inyanga: January 2021
Umhlalutyi uxela kwangaphambili ukutsiba ukuya kwi-300,000 yeedola kwi-Bitcoin ngo-Okthobha u-2021
Ukuhlaziywa: 31 January 2021
Ngokwengxelo kaRaoul Pal ye-Global Macro Investor Report, Bitcoin (BTC) iya kukhula nge-10x ukusuka kwintengiso yayo yangoku ngo-Okthobha u-2021.
Imodeli ye-GMI kaRaoul isebenzisa iMetcalfe Value ukwenza uqikelelo kwaye kungoku nje icebisa ukuba i-cryptocurrency ebekiweyo ayixatyiswanga kakhulu.
Imodeli ye-GMI isebenzisa ixabiso leMetcalfe ukwenza uqikelelo kwaye ngoku icebisa ukuba imali yedatha yexabiso ibaluleke kakhulu.
URaoul Pal, oqokelele amashumi eminyaka yamava okutyalomali macro kwihlabathi liphela, ebesoloko evakala malunga nethemba elinokubakho leBitcoin, nangaphambi ko-2020.
Amaxabiso e-cryptocurrency akhule ngokukhula ukusukela ngoko, kwaye ingxelo ye-GMI iphakamisa ukuba izinto "zishushu nje" zeBitcoin.
Okwangoku, i-BTC ithengisa kakhulu ngaphantsi kwexabiso leMetcalfe. Iziganeko zangaphambili zeemarike zeBitcoin zeenkomo bezisoloko zibona ukurhweba nge-cryptocurrency ngaphezulu kweXabiso leMetcalfe. Oko kwathethi, ukufunyanwa kweXabiso leMetcalfe, kwiinyanga ezizayo, kufanele ukuba ibe yeyona nto iphambili kwi-cryptocurrency ukuya kwi-300,000 yeedola nge-BTC ngo-Okthobha u-2021.
Iprojekthi ye-GMI ingqinelana nolunye uqikelelo oluvela kwabanye abahlalutyi nakwifemu.
Nangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo ukuba ixabiso leMetcalfe lithanda ukujongela phantsi ukubekwa kweenkunzi ze-BTC, i-rally ye-300k ecetywayo inokuba yinto ephantsi, kwaye eyona rally yexabiso inokufikelela kwi-1 yezigidi, oko kuthetha ukuba ukutyala imali kwi-BTC kwiinyanga ezisibhozo ezizayo ithuba elinokwenzeka kube kanye ebomini.
Amanqanaba aphambili eBTC okuBukela-nge-31 kaJanuwari
I-Bitcoin okwangoku ibuyela umva kwinkunzi yenkomo yakutshanje ibaleke iye kwinqanaba lama- $ 38,500 kwaye yalungisa indawo eyi- $ 32k kwakhona. I-cryptocurrency ngoku ijongene nokuphepha ukuwa ngaphantsi komgangatho ojonge ezantsi ojonge ezantsi kwi- $ 32k.
Ukuzikhusela ngempumelelo kwale ndlela yokuhamba iiyure ezizayo kunye neentsuku kunokunceda ukubuyela kwe-BTC kwindawo eyi- $ 38k. Kwicala elisezantsi, ukuwa okuzinzileyo ngezantsi kwalomgca kuya kufaka iBitcoin ngokuchasene ne- $ 30k yenkxaso yezengqondo kwakhona.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 34,100, $ 35,000, kunye ne- $ 36,000. Ngelixa amanqanaba ethu aphambili enkxaso eku- $ 32,000, $ 31,000 kunye ne- $ 30,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 974 billion
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 610 billion
I-Bitcoin Dominance: 62.6%
tags Bitcoin, BTC, iindaba
I-FTSE 100 (UKX) ikukuHamba okuMazantsi kodwa inokuthi ibuye kwiNqanaba 6361.10
FTSE 100 iwile kwinqanaba le-6407.50 emva kokophuka ngaphantsi komndilili oshukumisayo. Kukwaphuka okunjalo, i-downtrend inokuthi iqhubeke kwicala eliphantsi. Ngamanye amaxesha, imarike iya kubuyela umva kwaye iqhubeke kwakhona phezulu. Kwintengo efanayo nge-21 kaDisemba, imakethi yawela ezantsi yenyuka.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonisa imeko yangaphambili. Okwangoku, isabelo sikwinqanaba lama-43 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba i-UKX ikummandla we-downtrend kwaye iyakwazi ukuwa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isabelo sisehla. Ngomhla wama-28 kuJanuwari ukwehla, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isabelo siya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo. Owona mgangatho usezantsi ngowama-6361.10.
Isabelo singaphezulu kwipesenti ezingama-20 zes stochastic semihla ngemihla. Ibonisa ukuba isabelo sikwi-bullish umfutho. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zijike phezulu zibonisa uptrend.
Isabelo se-FTSE 100 (UKX) sisezantsi. Ngokuya kuhlalutyo lwezixhobo zeFibonacci, isabelo siya kuwela kwinqanaba le-1.271 Fibonacci extensions okanye ezantsi ezingama-6361.10. Kule nqanaba, isabelo sinokuhlehla kwaye sinyuke siye phezulu.
Ukoyikwa kweemakethi kule Veki intsha inyuka njengeDola, i-COVID-19 yeVala
I-coronavirus iqhubekile nokubetha umhlaba kwiveki ephelileyo. U-Boris Johnson, i-Nkulumbuso yase-UK uthe unethemba lokuba kuyakhuseleka ukuvulwa kwezikolo ngo-Matshi 8 njengoko ilizwe lihleli lodwa. IFransi ivale imida yayo kuwo onke amazwe angengawo awaseYurophu. E-US, uMongameli Biden uthe iCongress kufuneka ithathe amanyathelo ngokukhawuleza kwisicwangciso sakhe se-1.9 seetriliyoni sokuvuselela uqoqosho njengoko ngaphezulu kwama-433,000 amaMelika abuleweyo.
Ukuza kuthi ga ngoku, iiyantlukwano zecoronavirus ziye zavela kwihlabathi liphela, ngakumbi e-UK. Uvavanyo lwezonyango lokugonya ngokuchasene nokwahluka kwaseMzantsi Afrika kwecoronavirus eqhutywa yiNovavix Inc akubakhuseli abathathi-nxaxheba esele benayo i-coronavirus. Iziphumo zikaJohnson noJohnson kukholelwa ukuba ziyafana. Kwaye ngolwe-Sihlanu, umphathi we-Pfizer uthe kukho amathuba aphezulu okuba izitofu zexesha elizayo azisayi kusetyenziswa. Uhlobo olutsha lufunyenwe kumazwe angama-31, kubandakanya iMelika.
Oku kungathintela iinzame zokugonya abantu aboneleyo ukuze bakhe umhlambi! Kule veki, abathengisi baya kudinga ukubona ukuba umahluko uya kusasazeka ngakumbi kwaye ngesiphi isantya. Ukwehla kokukhula komkhuhlane womhlambi kunokuba yingxaki kuqoqosho kwikota yokuqala.
Iveki ephelileyo Ukuhamba kweMakethi
Uqwalaselo lwabatyali mali luye lwaphambukiswa kwimarike ye forex phakathi kwengxwabangxwaba yemarike yemasheya. Idola yaseMelika ixhamle kwimarike engonwabisiyo kodwa ithengiswa kumanqanaba aqhelekileyo ngokuchasene noogxa bayo baseYurophu. Iimali ezinxulumene nezinto zorhwebo kunye neeYen zaseJapan ziye zabethwa kakhulu ngobungozi bokuthintela umngcipheko.
I-GameStop yahlangana kabukhali njengoko abatyali zimali abathengisayo bathontelana kwimithombo yeendaba zentlalo bekhangela ixesha elifutshane lokukhama. Isitokhwe siwile ngoLwesine njengoko abarhwebi abohlukeneyo babeke imiqobo kurhwebo olunokukhethwa, kwizikhundla ezitsha kunye nasekuphakanyisweni kwemida.
Ubuhlanya bakhula njengoko ukungabikho semthethweni kwemida yorhwebo kuncitshisiwe. Isilivere ifikile nakutyalo-mali lomntu ngamnye. Imeko isekude ukuphela, kwaye ingxwabangxwaba inokuthi ihlale kude kube ziintsuku ezimbalwa ezizayo.
Isitalato iWall sigqibe iveki ngelahleko ezibukhali emva kokubetha kumgangatho omtsha ngoJanuwari. Kwangelo xesha, isivuno kwiibhondi zikaNondyebo wase-US ngaphambi kokuvalwa korhwebo kubonise ukonyuka okuncinci phakathi kokukhuthaza ngokubanzi idatha kwi-US.
tags ICoronavirus (COVID-19), KwiDola yaseMelika
I-GBPUSD ngoMeyi iqhubela phambili ngaphandle kokwehla ukusukela phakathi kwe-1.3700 'njengoko ukusasazeka kwentsholongwane kuncitshisiwe'
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPUSD-nge-31 kaJanuwari
Isibini se-GBPUSD siphume kwiveki ephelileyo ngeenzuzo ezithobekileyo emva kokunciphisa ukusuka kwinqanaba le-1.3700 ukuya kuvala kwi-1.3705. I-coronavirus isasazeka ukunciphisa ukunciphisa uxinzelelo kwaye yanikezela ukubuyela kwimeko yemali yase-UK eyayomelele kwimfuno yedola kumngcipheko-wokuthintela.
Amanqanaba okumelana: 1.4345, 1.4000, 1.3800
Amanqanaba enkxaso: 1.3624, 1.3515, 1.3300
I-GBPUSD iyancipha kwi-bullish traction yayo ejikeleze inqanaba le-1.3758 kodwa isekude kwi-bearish. Kwitshathi yemihla ngemihla, isibini iyaqhubeka ukuqhubela phambili Ngaphezulu komndilili wokuhamba oshukumayo we-13, obonelela ngenkxaso ebuthathaka kwi-1.3650, ngelixa izikhombisi zobuchwephesha ezinje nge-RSI ziphakathi kwamanqanaba amahle.
Kwimeko ebanzi, ekujolise kuko kuhlala kungumjikelo ophambili we-1.3800. Ukuqhawulwa okuzinzileyo kweli nqanaba kufuneka kukhatshwe kukuqhubeka kokurhweba ngaphaya komgca ophezulu othe tyaba, okwangoku okwizi-1.4000. Oku kuya kungqinisisa ezantsi kwinqanaba eliphakathi kwi-1.1409. Nangona kunjalo, ukuphambuka kwi-1.3519 kuya kugcina ukuvakala kwexesha eliphakathi kolunye uhla.
I-GBPUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Ukulinganisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, esi sibini sahlala ngaphakathi komndilili wokuhamba osisi-5 nowe-13 apho zombini zingenasijolo. Izikhombisi zobuchwephesha zihamba zijikeleze imidlana yazo, ziswele amandla ekhokelo. Okwangoku, izikhombisi eziphambili zilahlekile kumkhombandlela wazo kodwa zibambe ngaphakathi kwinqanaba elifanelekileyo.
Nangona kunjalo, ukunyuka kwe-GBPUSD ukusuka kwi-1.3177 kwaqhubeka ukuya kwi-1.3758 kwiveki ephelileyo kodwa kwabuya umva. Umkhethe wokuqala awuthathi cala kule veki. Kwelinye icala, emva kokuxhathisa kwe-1.3519 kwajika inqanaba lenkxaso, isibini sinokujolisa kwi-1.3300 kufutshane nekota esezantsi. Ukophula isigqibo samanqaku aphezulu e-1.3800 kuya kuqalisa kwakhona i-rally ngokubanzi ukusuka kwi-1.1409.
I-GBPJPY Ukutsalwa okuPhezulu kungatsala abathengi kwinqanaba elidlulileyo le-144.00, e-UK COVID-19 ithambisa
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-Jan 31
I-GBPJPY ihambile ngenkuthazo entsha ngelixa ibetha kwinqanaba kwi-143.95 ephezulu kwiseshoni yangaphambili. Ukuhamba ngambini okungaphezulu inokutsala abathengi idlulileyo inqanaba le-144.00 njengoko lilindele into elandelayo kule veki. Abathengi babini balindele ithemba eliphakanyisiweyo le-rally ukuya kwiindawo eziphakamileyo zakudala njengoko i-UK Covid-19 ithambisa.
Amanqanaba okumelana: 147.95, 145.00, 143.95
Amanqanaba enkxaso: 142.71, 141.21, 139.47
Njengoko kubonwe yonke imihla, ukonyuka kwinqanaba le-142.91 kwiseshoni yangaphambili kubonwa njengenqanaba lokuqhubela phambili lendlela esecaleni ukusuka kwinqanaba le-123.99 (esezantsi). Logama nje inqanaba lokumelana ne-144.95 lihlala liqinile, kwaye ekugqibeleni ukophuka okungagungqiyo kuhlala kudityaniso.
Nangona kunjalo, ulwaphulo olomeleleyo lwenqanaba le-144.95 linokunyusa ukujonga ukubuyela umva kwexesha elide. Ingqwalaselo iphela inokutshintshelwa kwinqanaba lokumelana ne-147.95 yokuqinisekisa. Umgangatho wetshathi ngoku uguqukayo njengesiqhelo esonyukayo, esingumqondiso wokunyusa kwikota ephakathi.
I-GBPJPY iTrend yexesha elifutshane: Ukutshintsha
Ukuphinda kubuyiselwe endaweni encinci kwi-GBPJPY ekupheleni kweveki edlulileyo kuyacebisa ukuba ulungiso lokubuyela umva ukusuka kwi-142.21 luphele nge-143.95 ngolunye utyhalo kule veki. Uvakalelo lokuqala luhlala kuluhlu kule veki kunye nolunye ulindelo olulindelweyo. Ukophula inqanaba le-143.95 kungakhokelela kwinqanaba lokumelana ne-144.95 yokuqinisekisa le meko inamandla.
Nangona kunjalo, kwelinye icala, ukophula inqanaba lokuxhasa elincinci le-142.71 kunokuguqula imeko inyukele kwinqanaba le-140.31. Elinye inyathelo elisezantsi linokunyusa uxinzelelo lokuthengisa ukuya kwi-138.00 yeebhotile, ngokwaphula iphethini ephezulu kwikota ekufutshane.
I-NZD / iUSD ifumana inkxaso ngaphezulu kwenqanaba le-0.7100 kunye nokubuya, i-Uptrend ngokunokwenzeka
Amanqanaba okuGxila aphambili: 0.7000, 0.7200, 0.7400
Amanqanaba enkxaso aphambili: 0.6200, 0.6000, 0.5800
Tyena Kiwi ihleli njengoko isibini sibuyela ngaphezulu kwenqanaba le-0.7100. Ukusukela nge-27 kaJanuwari, ixabiso beliwe emva kokugatywa kwinqanaba le-0.7250. Ukudodobala kungenzeka kuphele ukuba inqanaba le-0.7150 lenkxaso liyabamba. Umsila wezibane omde ubonakalisa ukuba kukho uxinzelelo lokuthenga olomeleleyo ngaphezulu kwenqanaba le-0.7100.
I-Kiwi inyuke yaya kwinqanaba lama-53 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aBonisa isiQinisekiso sexesha se-14. Ibonisa ukuba isibini sinendawo eyaneleyo yokuhlangana phezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zijike phezulu zibonisa umgaqo ophezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini se-NZD / USD sikwi-uptrend. NgoJanuwari 28 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye i-61.8% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci. Eli linqanaba eliphezulu le-0.7248.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ngokuthe tye. I-Kiwi ingaphezulu kwe-60% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. I-kiwi inokwenzeka ukuba inyuke njengoko ingqekembe iqala ngokunyuka.
Isibini se-NZD / USD siwile kwaye saphinda saqala senyuka senyuka sivela ezantsi kwi-0.7100. Ngokwesixhobo seFibonacci, uptrend wangoku uya kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-0.7248.
I-Chainlink (LINK) Uhlalutyo lwamaxabiso: I-LINK yenza ukuHamba okuLungileyo kodwa ijongane nomsebenzi wokuphakama kwi- $ 24 ePhakamileyo
Ukuhlaziywa: 30 January 2021
Ubuso be-LINk buyaliwa kwi $ 26 ephezulu
I-crypto inexabiso ekujoliswe kulo le- $ 30.56
Chainlink (LINK) Izibalo zaNgoku
Ixabiso langoku: $ 22.55
Intengo yeNtengiso: $ 22,588,192,832
Umthamo wokuThengisa: $ 3,485,144,033
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 18.00, $ 20.00, $ 22.00
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 8.00, $ 6.00, $ 4.00
I-Chainlink (LINK) Uhlalutyo lwamaxabiso ngoJanuwari 30, 2021
Ixabiso le-LINK iqhubekile nokwenza uthotho lwamanqanaba aphezulu kunye nezantsi. Ngomhla kaJanuwari 25, i-crypto yenze ukuphakama okuphezulu kunye nokunyuka okuphezulu kodwa yehlulekile ukuqhubeka nokunyuka. Ingqekembe yaphikiswa kwi $ 24 ephezulu. Kwicala elingaphezulu, ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphula ukumelana ne- $ 24, uptrend uya kuqhubeka. Kwelinye icala, ukuba ukuxhathisa okwangoku kuhlala kungaphulwanga, imeko esecaleni iya kulandela.
LINK / I-USD-Itshathi yemihla ngemihla
Izikhombisi zobuGcisa boKhonkco ukuFunda
Ixabiso le-crypto lihamba ngecala kwaye ukuba liphula umgca wendlela, kuya kubakho utshintsho kwimeko. I-LINK ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwi-bearish umfutho. Imivalo yamaxabiso ingaphezulu kwee-SMAs ezibonisa ukuba kunokwenzeka ukunyuka kwemali.
I-Chainlink inethemba lokuqhubela phambili ukuya phezulu. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-LINK iya kwenza enye inyathelo eliya phezulu. Ngomhla kaJanuwari 17 uptrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokuphinda ubonwe ngama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-LINK inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci. Lelona nqanaba liphezulu le- $ 30.56.
tags I-Chainlink, LINK, I-LINK / i-USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-Binance Coin (BNBUSD) Ixabiso libotshelelwe ngaphakathi kweedola ezingama-44 nakwii-40 zamaNqanaba
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-nge-30 kaJanuwari
Ukonyuka koxinzelelo lweenkunzi kunokuphelisa ukumelana kwinqanaba leedola ezingama-44 ezinokunyusa amaxabiso ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuxhasa le- $ 47 kunye ne- $ 51. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 44 likhuselwe ziibhere, ingqekembe inokujamelana nemithintelo kwi- $ 40, $ 36, nakwi- $ 31
Amanqanaba okubonelela: $ 44, $ 47, $ 52
Amanqanaba emfuno: $ 40, $ 36, $ 31
I-Crypto iyasebenza kwitshathi yemihla ngemihla. Uxinzelelo lomthengisi luye lwatyhala ixabiso ukuya kwinqanaba lenkxaso ebalulekileyo yeedola ezingama-36 ngoJanuwari 22. Ingqekembe leyo yayi-bearish ngexesha lemihla ngala veki. Iphethini yokuguqula ikhandlela eguqukayo ivela ebizwa ngokuba yiDoji nkwenkwezi yangokuhlwa kwinqanaba elifanayo lokumelana. Esi sesona sizathu siphambili sokuba amaxabiso enyuke ngequbuliso kwinqanaba lokumelana ne- $ 51 ngokwenziwa kweemarike ezingazinzanga ezikhokelela ekwenziweni kwamakhandlela emihla ngemihla anomsila omde.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-30 kaJanuwari
I-crypto ithengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ngokwenziwa kwamakhandlela emininzi yemihla ngemihla yeDoji; oku kubonisa intengiso engazinzanga. Ukonyuka koxinzelelo lweenkunzi kunokuphelisa ukumelana kwinqanaba leedola ezingama-44 ezinokunyusa amaxabiso ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuxhasa le- $ 47 kunye ne- $ 51. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 44 likhuselwe ziibhere, ingqekembe inokujongana nemithintelo kwi- $ 40, $ 36, nakwi-31 yenqanaba lokumelana.
Ixabiso le-BNB likwimo yokutshintsha kwitshathi yeeyure ezi-4. Isantya se-bearish sityhala i-crypto ukuba ingcamle inqanaba lenkxaso le- $ 36 ngoJanuwari 22. Ikhandlela le-pin yentsimbi yemihla ngemihla eyenziweyo kwaye oku kubangela intshukumo yokunyusa kwimarike ye-BNB. Ixabiso lenyuka ukuvavanya inqanaba lama- $ 47. Ixabiso okwangoku linyanzelisiwe phakathi kwenqanaba le- $ 44 kunye ne-40 yeedola.
Itshati ye-4 ye-BNBUSD, nge-30 kaJanuwari
I-crypto ithengisa ngaphezulu kwaye ijikeleze amaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba ukudityaniswa kuyaqhubeka kwimarike ye-BNB kunye nexesha eli-Index le-Relative Strength 14 elalatha ngaphezulu kwamanqanaba angama-50 libonisa umqondiso wokuthengisa.
IJapan 225 (JP225USD) ikwiDowntrend, kwinqanaba leethagethi 26956.40
Iindawo eziKhuselekileyo: 27200, 27600, 28000
IJapan 225 (JP225USD) yexesha elide iTrend: Bullish
IJapan i-225 iphinde yaqala phantsi ukuya ezantsi emva kweveki yokuguquguquka okungaphantsi kwenqanaba lama-29000. Isalathiso siwile kwaye sisondela kwinqanaba eliphantsi lama-27000. Ixabiso liphule ii-SMA zeentsuku ezingama-21. Ukuhamba okuya ezantsi kuya kukhawuleziswa ukuba amaxabiso ayaphuka ngaphantsi kweentsuku ezingama-50 zeSMA.
Ukufunda kweChartcators mihla le:
IJapan i-225 iwele kwinqanaba lama-46 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba intengiso ikummandla weDowntrend. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika phezulu zibonisa uptrend.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisezantsi. Nge-29 kaJanuwari ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kunika umbono wokuba imakethi iya kuwa kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye i-26956.40.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. I-JP225USD ingaphantsi kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwi-bearish umfutho kwaye sisondela kummandla ogqithileyo.
IJapan i-225 isezantsi. Ngokokuhlalutya kwesixhobo seFibonacci, isalathiso kunokwenzeka ukuba siqhubeke ukwehla ukuya kwinqanaba le-1.618 okanye i-26956.40.
I-Shanghai SE ye-Index edibeneyo (i-SHCOMP) yeFalls kwinqanaba le-3446.547, yenza ukulungiswa phezulu
Ukuhlaziywa: 29 January 2021
Iindawo eziKhuselekileyo: 3500, 3600, 3700
Isalathiso seShanghai SE esiDityanisiweyo (i-SHCOMP) yeTrend yexesha elide: I-Bearish
I-SHCOMP kukuhla okuthe emva kokugxothwa kwingingqi ethengwe ngaphezulu. NgoJanuwari 21 nowama-25, amaxabiso avavanyiwe ama-3640 kabini kwaye aphendulwa. Isalathiso siwele kwinqanaba eliphantsi le-3440 kwaye sabuya sabuya umva. Umsila wezibane omde ngaphezulu kwenqanaba lama-3440 ubonakalisa uxinzelelo lokuthenga olomeleleyo kwinqanaba elisezantsi.
I-SHCOMP iwele kwinqanaba le-44 le-Index ye-Relative Strength period 14. Isalathiso sikummandla weDowndrend kwaye singaphantsi komgangatho ophakathi 50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-50 zeentsuku ze-SMA zijonge phezulu zibonisa phezulu.
Isalathiso seShanghai SE esiDityanisiweyo (i-SHCOMP) kwiXesha eliPhakathi leTrend: Bearish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisezantsi. Nge-27 kaJanuwari ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba i-SHCOMP iya kunyuka iphinde ibuye umva kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci. Intshukumo yexabiso liwile ngaphaya kwenqanaba lokuguqula.
I-SHCOMP-1 Itshathi yeYure
I-SHCOMP ingaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso siwele kummandla ogqithileyo. Abathengi kulindeleke ukuba bavele kwindawo ethe kratya. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ziye ezantsi zibonisa ukwehla.
I-SHCOMP iwele kummandla ogqithileyo. Ukudodobala kufikelele kwi-bearish ukudinwa. Isalathiso siwele kwinqanaba le-3455 njengoko ixabiso lisenza ukulungiswa phezulu. Imakethi iya kuphinda inyukele phezulu ukuba inkxaso yangoku ibambe.
← Entsha izithuba1 2 ... 29 abaDala izithuba →